Tag: email ezubere iche | Martech Zone
Tag: email ezubere iche
Mailflow: Tinye Autoresponders na akpaaka Email usoro
Otu n'ime ụlọ ọrụ ndị ahụ nwere ebe ikpo okwu ebe njigide ndị ahịa jikọtara ha na ojiji nke ikpo okwu. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ndị ahịa ji ya mere ihe ịga nke ọma. Ndị ahịa ahụ gbara mgba hapụrụ. Nke ahụ abụghị ihe ọhụrụ na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla. N'ihi ya, anyị mepụtara usoro ntanetị nke na-agụ ma na-akpasu ndị ahịa iwe iwe iji ojiji nke ikpo okwu. Anyị nyere ha otu esi-vidiyo yana kwa